Indlela yokuyeka uononophala | Isiseko soMvuzo: Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya Indlela yokuyeka uonobumba?
Amawaka amaninzi abafana behlabathi lonke baye bazuza ngokushiya i-pornography. Kodwa, ungakwenza njani?
Kukho amanyathelo amathathu aphambili…
Okokuqala, kufuneka uqaphele ukuba kukho ingxaki engoku okanye ingenzeka
Okwesibini, kufuneka ufumane indlela yokuyeka. Oku kuthetha ukukrazula zonke iifoto zakho zoononophala kunye nokuphula iikhonkco ezinikezelayo
Okwesithathu kufuneka ufumane imisebenzi eminye ukuqinisa ingqondo yakho, umzimba kunye nentlalo yoluntu
Ukuyeka i-porn luhambo olwahlukileyo lomntu wonke. Yonke ingqondo yahlukile, ke inkqubo yokuyeka iyeyomntu ngamnye. Abanye bakufumanisa kunzima, ngelixa abanye banokugqiba ekubeni bame kwaye benze oko ngaphandle kwengxaki enkulu.
Kule candelo I-Foundation Reward izisa ezinye izixhobo kunye neendlela zokukunceda wena, okanye umntu onomnyamekelayo, ukuba ufumane amandla kunye nokuzimisela ukubaleka kwi-intanethi yokusebenzisa i-intanethi ye-intanethi. Sigubungela ngokupheleleyo ukuyeka uhambo lwezobucayi ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Inhlanhla ekwakheni ikusasa elingenasiphelo-mva kunye nokufumana ubomi obunelisayo kunye neqabane langempela.
Uvavanyo lwentsebenzo ngokwesondo kubantu
Uncedo kwi-intanethi ye-intanethi
Ukuhamba koononophelo mahala
Umzekelo woMvuzo weNqanaba loNyaka loMvuzo.
Iprogram yoKhuseleko lweNtlawulo yesithathu